Imicimbi | RayHaber
I-International City, Environmental and Health Congress i-2-4 izobanjwa ngo-Ephreli 2020 e-Ankara; Sihlala komakhelwane, ezifundeni, ezifundazweni, ezifundeni, ezwenikazi, eziqhingini nakuzo zonke izinhlaka zobuhle obuhlukile; Ukukhuluma ngomhlaba wethu ndawonye [Okuningi ...]
I-BUMATECH Bursa Mach Machine Technology Fairs eletha Metal Processing Technologies, Sheet Metal Processing Technologies ne-automation Fairs ngaphansi kophahla olulodwa, iBursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) neTÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ngu [Okuningi ...]
I-International Earthquake Workshop ehlelwe nguMasipala we-Istanbul Metropolitan ukuze i-Istanbul ibe idolobha elibhekene nenhlekelele iqala kusasa. IMeya kaMasipala wase-Istanbul Metropolitan Ekrem İmamoğlu izokwenza inkulumo yokuvula emsebenzini wokucobelelana ngolwazi. [Okuningi ...]
I-BUMATECH Fair Ivula Iminyango Yayo
I-BUMATECH Fair Ivula Iminyango Yayo; Ngeminyaka yedijithali esiphila kuyo, izinqubo zokukhiqiza ziyaguquka. Intuthuko yezobuchwepheshe, enikeza amandla amancane nokusebenza okwengeziwe, nayo ikhona emkhakheni wezokukhiqiza imishini. umshini [Okuningi ...]
Ukuma kwe-UTİKAD kudonsile ukunaka okukhulu eLogitrans Fair
I-International International Tourism and Logistics Service Producers Association UTİKAD, kulo nyaka 13. ILogitrans Fair ebibanjelwe okokuqala yahlangana nababambe iqhaza emkhakheni. I-13-15 UTİKAD imile kokulungelwe okuhlelwe ngoNovemba 2019 [Okuningi ...]
I-International Rail Industry Show Fair Iizophathwa Okwokuqala E-Eskişehir
Umbukiso Wezimboni Zojantshi, Ingqalasizinda Yezimboni Zikajantshi kanye neTechnologies Fair, ozohlelwa yi-Modern Fuarcılık ngokwesekwa nguMnyango Wezokuthutha Nengqalasizinda, inhliziyo yenhliziyo [Okuningi ...]
I-ISAF 2020 Ilungiselela ngentuthuko yeSurprise; Izinyathelo ezimbalwa ngaphambili komkhakha, i-ISAF 2020 ilungiselela ngezimanga ezinhle kubo bonke ababambiqhaza nezivakashi ezifuna ukulandela intuthuko. I-8-11 2020 ngo-Okthoba 24. Kuzokwenzeka kanye [Okuningi ...]
1. Ikhonkrithi yemigwaqo ekhonkolo kanye nemibukiso yaqala e-Ankara; Ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi-Ministry of Transportation futhi Ingqalasizinda, General Directorate of Emikhulu (KGM) kanye Turkey Usimende Manufacturers Association (TCMA) kanye ne-European Ukhonkolo eGandaywe Association (EUPAVE) amasu [Okuningi ...]
Noma ngesikhathi sokuwohloka komnotho kuwo wonke amagumbi omhlaba, i-ISAF iyaqhubeka nokukhula ngaphandle kokwehla kwesigqi sayo sokukhula. Ngaphandle kwezimbalo ezimbalwa kakhulu ezenzeke cishe kuwo wonke amazwe omhlaba, kuwo wonke ama-fairs 2019 [Okuningi ...]
Lo nyaka 23. I-ISAF ilungiselela ukuhlanganisa zonke izingxenye zomkhakha. Ezokuphepha, ezokuphepha emsebenzini, zomlilo, zeSmart Building nezeCyber ​​Security unyaka wonke zilinde umhlangano [Okuningi ...]
IMeya ye-İzmir uTunç Soyer wabamba iqhaza kuvulwa kweMAKTEK İzmir Fair. Inkampani ye-370 evela emazweni ayishumi nesikhombisa ihambele eMAKTEK Fair (Amathuluzi Omshini, Imishini Yokuxazulula Metal-Sheet, Amathuluzi Okubamba Abasiki, Izinhlelo Zokulawula Ikhwalithi) [Okuningi ...]
Ukubala kwehle kuqale i-FESPA Eurasia, okuhola phambili kokuphrinta kwesifunda sase-Yurasian, lapho lo mkhakha ujabule khona. I-FESPA Eurasia 2019, 5-8, lapho ukubhaliswa ku-inthanethi sekuqalile, kwaqala ukukhangisa nokuphrinta kwezimboni [Okuningi ...]
I-3 igxile ezinhlelweni zikanjiniyela kamasipala. I-International Metrorail Foramu yahlanganisa ndawonye abathatha izinqumo zomphakathi kanye nabamabhizinisi azimele e-Ankara ATO Congresium. Ukusekelwa Okuyisisekelo kwe-TCDD ngaphansi kwe-Cahit Turhan, uNgqongqoshe Wezokuxhumana kanye Nezingqalasizinda [Okuningi ...]